လွဲမှားနေသော ခေါင်းစဉ်များ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » လွဲမှားနေသော ခေါင်းစဉ်များ
Posted by ချစ်ရင်ထူး II on Jan 31, 2012 in Copy/Paste | 13 comments
ချစ်ရင်ထူး လက်စမ်း စာပေ လွဲမှားနေသော ခေါင်းစဉ်များ
ကျွန်တော် ရွာထဲကိုမရောက်ဖြစ်တာ ကြာပါပြီ၊ ဒီနေ့ ရောက်တုန်းမှာ kotun winlatt ရေးထားတဲ့ ပရဟိတ ဆိုတာ ဆိုတဲ့ ပို့စ် ကိုတွေ့တာနဲ့ ကျွန်တော်တက်ရောက်ခဲ့ဖူးတဲ့ ပရဟိတ ကလေးများကို အာဟာရ ကျွေးပွဲ အကြောင်းလေး နဲနဲလောက်ပြောပြချင်လို့ပါ၊ နဲနဲတော့ကြာခဲ့ပါပြီ၊ ကျွန်တော်တို့မြို့မှာပါ၊ နဲနဲ လူကြီးပိုင်းက လူက မြို့နယ် ပရဟိတ ကျောင်းကို အာဟာရ ကျွေးတဲ့ အလျှူ တစ်ခုပြုလုပ်ပါတယ်၊ ကျွန်တော့်ကိုလဲ ဖိတ်တော့ ကျွန်တော်လဲ သွားရပါတယ်၊ ရောက်သွားတော့ မြို့က လူဂုဏ်တန် တွေကို သီးခြား ဧည့်ခံနေတာတွေ့ပါတယ်၊ ဝက်သား၊ ကြက်သား၊ စသည်ဖြင့်ပေါ့လေ (အရောမပါ) တဲ့ဟင်းများနဲ့ ဧည့်ခံနေတာတွေ့ရပါတယ်၊ ကျွန်တော် တောင် ဝမ်းသာပီတိ ဖြစ်မိပါတယ်၊ ကျွန်တော်ကတော့ မလျှူနိုင်တော့ သာဓု ခေါ်ရုံသက်သက်ပေါ့၊ ကျွန်တော် အမှတ်မထင် နောက်ဘက်က အခန်းထဲကို ဝင်သွားမိတော့ အဲဒီမှာ ကလေး တွေကို ကျွေးနေတာပါ၊ ကျွန်တော် ကလေးတွေကို ကျွေးတဲ့ဟင်းကို မြင်လိုက်တော့မှ ရင်ထဲမှာ တစ်မျိုးကြီးဖြစ်သွားပါတယ်၊ ရှေ့ခန်းမှာ မြင်ခဲ့ရတာနဲ့ တစ်ခြားစီပါလား၊ ပဲဟင်း အရည်ကြဲကြဲ နဲ့ ငံပိကြော်၊ ကြက်သားကို အာလူးနဲ့ ရောထားတယ် ၊ အဲဒါပဲ စားရတယ်၊ အဲဒါတောင် ခွဲတမ်းနဲ့ ကျွေးတာတဲ့၊ အလျှူ့ရှင်က ဘယ်လိုကျွေးတာလဲ တော့မသိဘူး၊ ကလေးတွေ ကတော့ လူကြီးတွေ လို မစားရတာ အသေအချာပဲ၊ တစ်ကယ့်ကို ဝမ်းနဲစရာကောင်းပါတယ်၊ နောက်တစ်နေ့ ကျွန်တော် အဲဒီ ကိုထပ်ရောက်ဖြစ်ပါသေးတယ်၊ အဲဒီမှာ ကိုရင် တစ်ပါးက ဆွမ်းစား နေတာကိုတွေ့တော့ ကိုရင် ဘာဟင်းနဲ့ စားလဲ သိချင်တာနဲ့ သွားကြည့်တော့ ကိုရင်က သပိတ် ကိုဖွက်လိုက်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်လဲ လိုက်ပြီးတော့လု ကြည့်လိုက်တော့ ဟင်းမပါ ပါဘူး၊ ဆွမ်းချည်းပဲ စားနေတာပါ၊ ရှေ့က စားပွဲပေါ်မှာတော့ ငံပိချက် ၊ ပဲဟင်း အရည်ကြဲကြဲ ၊ ဒါပဲရှိပါတယ်၊ ပရဟိတ က ကိုရင် ကို ဘယ်သူကမှ ဟင်းမလောင်းကြပါဘူး၊(ကျွန်တော်လဲ ပါတယ်) အဲဒီတော့ ကျောင်းက တာဝန်ယူရတယ်လေ၊ ဒါပေမယ့်ကျောင်းက လဲခက်တယ်၊ အလျှူရှင်က လျှူတာကိုတောင် ကျောင်းသားတွေ ကိုရင်တွေကို ခွဲတမ်းနဲ့ လားဗျာ၊ တစ်ကယ်ကို ရင်နာစရာကောင်းပါတယ်၊ ကျွန်တော် တို့တွေမှာ အဲဒါတွေ လိုအပ်နေပါတယ်၊ သူ့ထက်ပိုတာက မနေ့ကမှ ကျွန်တော်တို့ မြို့မှာ ၇၅ နှစ်မြောက်(စိန်ရတု) လုပ်ပါတယ်၊ စာပြန်ပွဲ ပါ၊ စာပြန်ပွဲဆိုတာ ဘုန်းကြီးတွေ ကိစ္စပါ၊ လူတွေက ဘာလို့ဝင်ပါရတာလဲ ၊ အဲဒါထက်ပိုဆိုးတာက အဲဒီနေ့ညမှာ အဆိုတော် မလေး ကို ၁၁သိန်း(တစ်ဆယ့်တစ်သိန်း) ပေးပြီးတော့ ငှားတာပါပဲ၊ အဲဒီ စာပြန်ပွဲကို တက်ရောက်ဖို့အတွက် အဝေးကနေ သံဃာတော်တွေကို ပင့် ထားတာရှိပါတယ်၊ ကားမောင်းသမား တစ်ဦးကပြောပြပါတယ်၊ “ငါတို့ ဒီကပင့်လို့သာလာရတာ ၊ တစ်ကယ်ဆိုရင် တရားပွဲကို ထားခဲ့ရတာ၊ ပြီးတော့ ဒီမှာက နေ့ခင်းကြီး နေကပူပူ နဲ့၊ ရှေ့ကနေ ဝန်းခင်း တာက လဲ ဘယ်လိုတွေလုပ်မှန်းမသိပါဘူးကွာ ဆီကလဲ ကုန်လိုက်တာမှ လျှူတဲ့ ဝတ္ထုက ၁၀၀၀၀ ကျော်ကျော် လေးရယ်၊ ဘယ်လိုလုပ်ပါ့မလဲ ”တဲ့ ၊ဟုတ်ပါတယ် သံဃာ တွေကို လျှူမယ့် ပိုက်ဆံကို အဆိုတော် မလေးကို လျှူလိုက်တယ်လေ၊ ပြီးတော့ အဲဒီ စာပြန်ပွဲက ကျွန်တော် ပြောတဲ့ ပရဟိတ ကျောင်းနဲ့ ဘေးချင်းကပ်လျှက် ပါ၊ တစ်ကယ်လို့များ အဲဒီပိုက်ဆံ ၁၁၀၀၀၀၀ ကို ပရဟိတ အသင်းကိုလျှူတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့သူကို ပေးကမ်းတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် လုပ်သင့်တယ် လို့ ကျွန်တော် ယူဆပါတယ်၊ ၊ တစ်ကယ့်ကိုဗျာ ဘာတွေလုပ်ကြမှန်းကို မသိပါဘူး။ ကျွန်တော်သာ ပိုက်ဆံချမ်းသာရင်တော့ အဲလိုပဲလုပ်မှာပါ။
အားလုံးပဲ စစ်မှန်သော အတွေး အကြံများကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ….ပရဟိတ လုပ်ငန်းများကို ဒီထက်မက ပြုလုပ်နိုင်ကြပါစေ…..
ဘယ်လိုပြောရမလဲ။ အခုခေတ်စားနေတဲ့သီရိသုဓမာဘာညာကွိကွတွေကလဲထိုနည်းလည်းကောင်းပဲလေ။ ဘွဲ့လိုချင်ပါတယ်ဆိုလျှောက်လွှာတင်။ ဟိုအပေါ်ကမှဘယ်မှာရေတွင်းလှု။ ဘယ်မှာ ရှင်၁၀၈ပါးပြု အစရှိသဖြင့်ခိုင်းတာလုပ်ရတာ။ ပြီးတော့အရှက်မရှိအဲဒီဘွဲ့ကိုသတင်းစာထဲတခန်းတနားထည့်ပြီးယူကြ တာ။ စေတနာမပါပါ။ ( လူတိုင်းတော့မဆိုလိုပါ၊ ဒါပေမဲ့တော်တော်များများဒီလိုပါပဲ )။ အခွင့်အရေးအတွက်စေတနာကိုလုပ်စားနေကြတာပါ။ ရင်နာစရာပါ။
ဆရာတော် မေတ္တာရှင် (ရွှေပြည်သာ) ရေးတဲ့စာအုပ်လေးတစ်အုပ်ထဲမှာ ဖတ်ခဲ့ဘူးပါတယ်။
၀ါဆိုသင်္ဃန်းကပ်တယ်ဆိုပြီး လုပ်ကြတဲ့ အလှူတွေမှာ
တကယ်ရည်ရွယ်တာက သံဃာတော်တွေကို သင်္ဃန်းကပ်ဖို့ပါ။
အထူးပြုနေကြတာက VIP ဧည့်သည်တွေကို ဖိတ်ပြီး
ဘုန်းကြီးလှူတဲ့ သင်္ဃန်းကျတော့ ဈေးပေါပေါနဲ့ ရတဲ့ သင်္ဃန်းကိုလှူကြပါတယ်။
အဓိကကျတဲ့ သင်္ဃန်းအလှူကို ပေါ့ပေါ့တန်တန် သဘောထားပြီး
ဂုဏ်ပကာသန ကျွေးမွေးဧည့်ခံတာကို အဓိကထားနေကြတာကို ပြောသွားတာပါ။
သင်္ဃန်းကပ်မယ်ဆိုရင် ညနေခင်းမှာ အအေးလေးတိုက်ပြီး
သင်္ဃန်းကိုသာ အဓိက ထားကြဘို့ ဆုံးမထားပါတယ်ဗျာ။
စာအုပ်နာမည်တော့ မေ့နေလို့ဗျာ။ အိမ်ရောက်ရင် ပြန်ရှာလိုက်ပါဦးမယ်။
အဲဒီလို လိုအပ်ချက်တွေကို ပြောပြမှ သိကြရင် ဆင်ခြင်နိုင်ကြတာပေ့ါ။
အလှူလုပ်တဲ့အခါမှာ အလှူရှင်အများစုက ဝေယျာဝစ္စဆောင်ရွက်သူတွေ စီစဉ်သလို လုပ်လိုက်ကြတာများပါတယ်။
ဝေယျာဝစ္စအဖွဲ့အနနဲ့က အလှူ့ရှင်လည်း အကုန်အကျ သက်သာအောင် အမြင်လည်း လှအောင်ဆိုပြီး စီစဉ်ပေးတတ်ကြတယ်။
တခါက မြို့လုံးကျွတ် မီးခိုးတိတ် အလှူကြီးတစ်ခုလုပ်တယ်။
သံဃာတော် ၁၀ ပါး ပင့်ပြီး ဆွမ်းကပ်တယ်။
မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ သံဃာက အများကြီးပဲ။
လူတွေ တမြို့လုံး အုန်းအုန်းကျွက်ကျွက် မီးခိုးတိတ် သွားအားပေးကြရပေမယ့်
ကျန်တဲ့ ဘုန်းကြီးတွေ၊ မယ်သီလရှင်တွေ၊ ကိုရင်တွေခမျာတော့ မပါဘူးဖြစ်နေတာပေ့ါ။
အလှူ့ရှင်တွေအနေနဲ့ ဘုန်းကြီးတွေ၊ ကိုရင်တွေ၊ သီလရှင်တွေကို မလှူချင်တာ မဟုတ်ပဲ ကြားထဲက သတိမထားမိပဲ လွတ်သွားတာ။
အဲဒါကို ဘေးကလူတွေအနေနဲ့ ကိုယ်ရင်းနှီးရင် အလှူ့ရှင်ကို ပိုအကျိုးများစေမယ့် အကြံဥာဏ်မျိုး ပေးသင့်တယ်။
ရင်းနှီးမှ ပြောစေချင်တာက အလှူ့ရှင်ရဲ့ သဒ္ဒါတရားထက်သန်မှုကို ချင့်ချိန်နိုင်ဖို့ရယ်၊ ကိုယ်ပြောတဲ့စကားကို လက်ခံနိုင်မနိုင်ကို ချင့်ချိန်နိုင်ဖို့ရယ် ဖြစ်ပါတယ်။
လက်စမ်းစာပေမှာ ကော်ပီရွိက် ရှိတယ်နော်
(အလကားသက်သက် နောက်တာပါနော။ ကြိုက်လို့ ယူသုံးတယ်ဆိုရင်တောင် ၀မ်းသာကျေနပ်ပါတယ်။)
ဘာသာရေး အသင်းအဖွဲ့ တွေ တော်တော်များများမှာ ဖြစ်နေကြတဲ့ ထုံးစံတစ်ခု လိုပါဘဲ စာရင်းရှင်းတမ်း
တွေထွက်လာရင် အဓိက ကျတဲ့ နေရာတွေမှာ အသုံးပြုတဲ့ ငွေကြေးထက် တခြား ဗာဟီရ လို့ သုံးကြတဲ့ 
အသုံး စရိတ်တွေမှာ ပိုပြီး ကုန်ကျစရိတ်တွေ မြင့်တတ်နေတာ တွေပါ အထက်ကပြောသလိုဘဲ စာပြန်ပွဲ
မှာ သုံးတဲ့အသုံးစရိတ်ထက် အဆိုတော်နဲ့ တီးဝိုင်းကို ငှားလို့ ပေးရတဲ့ ကုန်ကျ စရိတ်က ပိုများနေသလို
ပေါ့. ဘာသာရေးအသင်းအဖွဲ့ အစည်း တွေကို သေချာ သိစေသင့်ပါတယ်..လှုဒါန်းတဲ့ သူတွေကလည်း
သူတို့ လှုတဲ့ ငွေကို ဘယ်လိုအသုံးချသလဲ.ဆိုတာကို သေချာလေ့လာပြီးမှ လှုသင့်ပါတယ်..
အဖွဲ့ အစည်းတွေမှာအဓိက ဖြစ်နေတာ ကတော့ ဘက်ဂျက်လျှာထားတဲ့ ကိစ္စပါဘဲ.. ဥပမာ ကျနော်သိတဲ့ 
အဖွဲ့တွေဆိုဆွမ်းလောင်း ဖို့ အတွက် အလှုခံထွက်ပါတယ်.ရရှိလာတဲ့ ပိုက်ဆံ ဟာဆွမ်းလောင်းဖို့ ဘဲ
ဖြစ်ရပါမယ်.. ဒါပေမယ့် ဆယ်သိန်းရတဲ့ နေရာမှာ သုံးသိန်းလောက် ဆွမ်းလောင်းပြီးတော့ ကျန်တဲ့ ပိုက်ဆံ
က အသင်းအတွက် အသုံးစရိတ်လို ဖြစ်နေပါတယ်..အသင်းသားတွေကို ပျိုးထောင်ဖို့ အသင်း ပစ္စည်းတွေ
၀ယ်ဖို့ အဲ့သည်လိုမျိုးတွေပါ.အဲ့သည်နောက်မှာ ပိုက်ဆံတွေပိုလာပြီးတော့ မလိုလားအပ်တဲ့ကိစ္စတွေမှာ
These things are very brazen kinds of misusing the funds entrusted upon people who are responsible and should be accountable for each and every cent/pya they used on belhalf of donors. There are several such happenings where people cannot differentiate between what is essential and what is for showing off. I have also experiencedaschool celebration in which old students pay respect to their teachers but most of funds were used for hiringapopular music band and the major recipients, teachers only get justalittle more than pocket money though the fund raising is good.
But if the donation is sponsored by some individual who prefer his donations to be enjoyed by the VIPs or affluent people, that is another thing.
ထိုင်စားနေရပေမဲ့ မြိုမကျတာတွေ ရှိပါရဲ့။
ဒါပေမဲ့ လူကြီးဆိုပြီးခေါ် ကျွေးနေတော့ လဲ..ဟဲဟဲ..ဟဲဟဲ..နဲ့ပေါ့..။
ကိုချစ်ရင်ထူး စာ ကို ဖတ်အပြီး ၊ ကျွန်တော့်နားထဲမှာ ကြားနေတုန်းဘဲ ဖြစ်တဲ့ စကားတစ်ခွန်း ကို ပြန်ကြားမိတယ် ။ ဒီလိုဗျ
လူတွေဟာ မြို့ ပေါ်မှာ ဘာမှလိုလေသေးမရှိအောင် ပြည့်စုံကြွယ်ဝနေတဲ့ ဘုန်းကြီးတွေ ဆိုရင် ကျောင်းဆောက်လှူချင်ကြတယ် ၊ ကားလှူချင်ကြတယ် ၊ အိုဗျာ..အစုံပေါ့ ။
အဲ… တစ်ကယ့်တစ်ကယ် ၊ ဝေးလံခေါင်သီတဲ့ နေရာမျိုးမှာ ဝိနည်းနဲ့ အညီ သာသနာပြုနေတဲ့ ပရဟိတ တွေ လုပ်နေတဲ့ ဘုန်းကြီးတွေ ရဲ့ လိုအပ်ချက်မျိုးကြတော့ ၊ ဘယ်သူမှ ကျောင်းဆောက်မလှူချင်ကြဘူး ၊ ကားတို့ ကျန်တာတခြားဟာတွေ ဆိုတာ ဝေးပြီ ၊ အဲ့နေရာတွေမှာ ကျောင်းဆောက်လှူမယ်ဆိုရင် ၊ မြို့ ပေါ်မှာ ကျောင်းဆောက်လှူတာရဲ့ ၁၀ပုံ ပုံရင် ၁ ပုံလောက်ဘဲ ကျသင့်တာပါ တဲ့ ဗျာ ။
မိတ်ဆွေတို့ ရေ ၊ အလှူလုပ်မယ်ဆိုရင် ၊ ကိုယ်လှူချင်တဲ့နေရာမျိုးမှာ လဲ လှူကြပါ ။ တစ်ကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာမျိုးတွေမှာလဲ အလှူသုံးခါလုပ်ရင် တစ်ခါလောက်တော့ လှူနိုင်ကြပါစေ ဗျာ ။
ခေါင်းစဉ်တင်လွဲနေတာမဟုတ်ဘူး……။ အကြောင်းအရာကလည်းမမှန်ဘူး…..။ ထင်ပေါ်လိုမှုတွေက များနေတယ်….။
ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ ကျွန်တော် ပိုစ့်တစ်ခုထပ်တင်ပါဦးမယ် သူ့ထက် ပိုပြီးတော့ လွဲတာတွေကိုပေါ့
ကျွန်တော့်မျက်စိ ထဲမှာ ကြည့်လို့ကို မရတာတွေပါ..သူများမကောင်းကြောင်းမဟုတ်ဘူးနော်